Qoorqoor oo Muqdisho kusoo laabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Qoorqoor oo Muqdisho kusoo laabtay
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor oo dalka dibaddiisa ku maqnaa muddooyinkii udambeeyay ayaa dalka dib ugu soo laabtay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha dowladg goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa dalka dib ugu soo laabtay kaddib safar qaatay muddo ka badan toban casho oo uu ku joogay waddanka Turkiga.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa la filayaa inuu ka qeyb galo shirka lagu wado inuu dhawaan ka furmo xerada Xalane kaasoo ay ku baaqday beesha caalamka oo ay hormuud ka tahay dowladda Mareykanka. Qoorqoor oo lagu xanto inuu saaxiib layahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaan weli la ogeyn mowqifkiisa ku aaddan ka qeyb galka shirkaasi, iyadoo si hoose loogu xamanayay maalmihii udambeeyay inuu iska diidi doono shirkaasi.
Ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan mowqifka Galmudug ee shirka aaya-ka tashiga doorashooyinka Soomaaliya, taasoo la filayo in ay Galmudug u madax bannaanaan doonto. Farmaajo ayaa damacsan inuu ka dhaadhiciyo in ay iska diidaan ka qeyb galka shirka ay Beesha Caalamku iclaamiyeen madaxweynayaasha saddexda ah iyo guddoomiyaha uu isagu soo magacaabay ee Cumar Filish.